IT Technician & Interview - MYSTERY ZILLION
IT Technician & Interview
March 2010 edited February 2011 in ဖတ်စရာ
ကျနော် MZ မှာ Bro တစ်ယောက်မေးထားတဲ့ Post တစ်ခုကိုဖတ်မိပြီး စိတ်ကူးတစ်ခုပေါ်သွားလို့ .........
သူ့ Post က ဒီမှာ ....
IT နဲ့ဆိုင်တဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ကျနော်တို့ CV ရေးရမယ်။
ပြီးရင် Interview ၀င်ရမယ်။ မေးခွန်းတွေဖြေရမယ်။
ဒီနေရာမှာ .... ကိုယ့်ရဲ့ အင်တာဗျူးအတွေ့အကြုံတွေကို ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
နောက် .... ကိုယ် အမေးခံခဲ့ရတဲ့မေးခွန်းတွေ ... ( အဖြေသိရင် အဖြေလေးတွေပါ ) ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။
IT related questions တွေတင်မကပဲ HR related question တွေပါ ရေးပေးစေချင်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်မဲ့ Organization ကြီးရင် ကြီးသလို HR နဲ့လဲပတ်သက်ရမှာမို့လို့ပါ။
IT နဲ့ဆိုင်တဲ့ အလုပ်လုပ်ဖို့အတွက် ကိုယ့်ထက် Senior တွေဆီကနေလေ့လာနိုင်သလို ... Junior တွေအတွက် လဲ share ပေးနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။
အလုပ်လျောက်ဖို့ CV (Curriculum Vitae ) တင်ပြီဆိုရင် вЂ¦ ရိုးရိုး company တွေမှာ CV ချည်းပဲ ဒီတိုင်းတင်လို့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ вЂ¦вЂ¦ Organization ကြီးမယ် or NGO, UN တွေမှာ တင်မယ်ဆိုရင် CV နဲ့ အတူ Cover Latter ပါ ပါမှ ဖြစ်ပါမယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ вЂ¦. Cover Latter မပါတာတွေ့တာနဲ့ HR က ဖတ်တောင်မကြည့်ပဲ вЂ¦ CV ကို အမှိုက်တောင်းထဲ ပစ်ထည့်တာခံရမှာပါ။
Cover Latter ရေးနည်း နမူနာလေးတစ်ခု ပါတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
To: HR Officer Date:
City & division.
Concerning to the above-mentioned subject, I would like to apply for the post of
in your organization. I am very interested and strongly desire to work in IT Field. Especially, I want to work as
For my working experiences, I am working with
company asa( your post ), Then, Explain what are your responsibilities there. ( For your first job )
and Explain what are your responsibilities there
Company. ( For your second job )
company. Explain what are your responsibilities there. ( For your third job )
I attach here with my Curriculum Vitae and supporting documents for your information. I promise I do the best I can whatafully difficulties work I get. I would be very grateful if you would kindly employ me in your organization.
အဓိက သတိပြုရမှာက Cover Latter ကို တစ်မျက်နှာထက် ပိုမရေးဖို့ပါပဲ။
CV Format လေးတစ်ခုလဲ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
В· Sex :
В· Marital Status :
В· Expected Salary :
В· Availability :
Education and personal skill
BA, B.Sc, B.barnyar
- MCP, MCTS, MCSA, MCSE
- MCITP : ENTERPRISE ADMINISTRATOR
- bar nyar
- kwi kwa
- Computer Operator (Company Name )
- Junior Network Administrator (Company Name)
- Office Administrator (Company Name)
- Write your Duty Responsibilities Here
Г Challenging new Technologies and new society
Г Prefers working asaconfidence and reliable each other
Г Prefers hardworking and learning new things
Г Increasing mutual benefits
( NOTE : References နေရာမှာ ကိုယ့်ကို တော်ကြောင်းကောင်းကြောင်းထောက်ခံပေးမဲ့ လူကြီးသုံးယောက်ကိုထည့်ပေးရပါမယ် )
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျ ခုလိုမျှေ၀ပေးတဲ့အတွက်
UN မှာ လျောက်မယ်ဆိုရင်တော့ UN P11 Form နဲ့လျောက်မှရပါတယ်။
UN P11 Form Sample တင်ပေမဲ့ .... အရမ်းများလို့တင်လို့မရလို့ လင့်ပဲပေးလိုက်တော့မယ်။
စိတ်၀င်စားသူများ ဒေါင်းကြည့်ကြပါကုန် ....
Interview အမေးအဖြေတွေကိုတော့ ... နောက်နေ့မှပဲဆက်ရေးတော့မယ်။
IT related question & answer တွေအပြင် HR related question & answer တွေကိုပါရှာပေးပါမယ်။
လောလောဆယ်တော့ HR Officer ကို အပူကပ်လိုက်ဦးမယ်။
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...... KO Alexander ရဲ ့gmail လိပ်စာလေးဖြစ်နိုင်ရင်သိပါရစေခင်ဗျာ.......
ကျနော့်မေးလ်က alexander.mz.mm [at] gmail.com ပါ။
ဒါပေမဲ့ ... ကျနော် chatting လုံး၀မ၀င်ပါဘူးခင်ဗျ။ မေးလ်တော့စစ်ပါတယ် ....
အလုပ်၀င်တဲ့အခါမှာ ံHR Dept. ဘက်ကမေးလေ့ရှိတာလေးတွေ .....................
- ကိုယ့်ရဲ့ အားနည်းချက်၊အားသာချက် ၃ခုလောက်စီပြောပါ။
- ဘာကြောင့် ဒီကုပ္မဏီ/အဖွဲ့အစည်း မှာ လုပ်ချင်တာလဲ။
- ကိုယ်က ဒီရာထူးနဲ့ ထိုက်တန်တယ်လို့ ဘာကြောင့်ထင်တာလဲ။
- အရင်အလုပ်တွေတုန်းက အကြီးမားဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့ အခက်အခဲက ဘာလဲ။
- တကယ်လို့ ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်မှာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်မဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ ပြဿနာအခက်အခဲကြုံလာရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။
( ဥပမာ - ကျနော် IT နဲ့ပတ်သက်ပြီးမဖြေရှင်းနိုင်တော့ရင် .... Online ပေါ်တက်ပြီး အဖြေရှာမယ်၊ IT Field ထဲကသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဆက်သွယ်ပြီး မေးမြန်းမယ် ... အဲလို)
- ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ခွင်မှာ Soft Power ( ကိုယ့်ရဲ့ Personal Skill အသုံးပြုမှု့ ) နဲ့ Hard Power ( ကိုယ့်ရဲ့ ရာထူးအာဏာ အသုံးချမှု့ ) ဘာကိုဦးစားပေးမလဲ။
အဲဒါတွေကတော့ မမေးမဖြစ် Basic မေးခွန်းလေးတွေပါပဲဗျာ။
References ထည့်တာက References Letter ကိုသတ်သတ်တောင်းပြီးတော့ ထည့်ပေးရမှာလား
ဒါမှမဟုတ် CV မှာပဲ တစ်ခါတည်း နာမည်နဲ့လိပ်စာနဲ့ပဲထည့်ပေးရင်လုံလောက်လားမသိဘူး
ထောက်ခံပေးမဲ့ လူကြီးသုံယောက်တော့ရှာထားပြီးပြီ .:D